တရုတ်နိုင်ငံမှ လက်မှုပညာရှင်တစ်ဦးက စူးကျိုးမြို့ဥယျာဉ်ပုံစံငယ်ကို ဝါးအချောင်း၂,၀၀၀ဖြင့်ဖန်တီးခဲ့ - Xinhua News Agency
ဖူကျန့်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံမှ Chen Jinjie ဟုအမည်ရသည့် လက်မှုပညာရှင်တစ်ဦးသည် ဝါးအချောင်း၂,၀၀၀ ကို အသုံးပြုကာ ရိုးရာပုံစံဖြစ်သည့် စူးကျိုးဥယျာဉ်ပုံစံငယ်တစ်ခုကို အချိန် ၆ လကြာ ဖန်တီးတည်ဆောက်ခဲ့ရာ လက်ရာမြောက်လှပသောကြောင့် ပရိသတ်များစွာက နှစ်ခြိုက်ခဲ့ကြသည်။အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ် Chen သည် တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းဖူကျန့်ပြည်နယ် မြို့တော် Putian ရှိ Xiangtang ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ငယ်စဉ်ကတည်းက လက်သမားဆရာတစ်ဦးအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
လက်မှုပညာရှင် Chen Jinjie က “အစပိုင်းကတော့ ကျွန်တော့် သမီးကစားဖို့ အရုပ်လေးတစ်ခုလောက်လုပ်ချင်ရုံပါပဲ ။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်အဲဒီ ဗီဒီယို ကို အွန်လိုင်းမှာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာအားပေးသူတွေများလာခဲ့တာပါ။ နောက်တော့ ကျွန်တော့်ရဲ့လက်ရာကိုလူတွေအများကြီးစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်လာခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ပရိဘောဂတွေလုပ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့လိုက်ပြီးတော့ ဒီလက်မှုပစ္စည်းလေးတွေဖန်တီးတဲ့လိုင်းဘက်ကူးခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်အခုထိလုပ်ကိုင်နေတုန်းပါပဲ။ ဒီလက်ရာကိုကျွန်တော်သိပ်နှစ်ခြိုက်ပါတယ်။ ဒီလက်ရာတစ်ခုလုံးဖန်တီးရတာကိုပျော်မွေ့နေခဲ့တာပါ၊ နောက်ဆုံးပြီးသွားတော့လည်းကျွန်တော် ဒီလက်ရာကိုသိပ်တန်ဖိုးထားမိပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီလက်ရာကို လူတွေက အသိအမှတ်ပြုကြတော့ကျွန်တော့်အတွက်သိပ်ပြီးတော့ ကျေနပ်ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ၊ အများကြီးကျေနပ်တာပေါ့။ ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးနေဦးမှာပါ” ဟုဆိုသည်။
စူးကျိုးဥယျာဉ် ပုံတူမှာ ၎င်း၏ ပဥ္စမမြောက် လက်မှုလက်ရာဖြစ်သည်။ အရှည် ၁၆၀ စင်တီမီတာ ၊ အကျယ် ၁၄၀ စင်တီမီတာ၊ အမြင့် ၇၀ စင်တီမီတာ နှင့် အလေးချိန် ၃၀ ကီလိုဂရမ်ရှိသော ယင်းဥယျာဉ်တွင် အခန်း ၁၆ ခန်းပါဝင်သည်။ အရွယ်အစားသေးငယ်သော်လည်း ပုံစံငယ်၌ လူသွားစင်္ကြံများ ၊အဆောင်များနှင့် ခြံဝန်းတစ်ခုပါဝင်သည်။
Chen Jinjie သည် ၂၀၁၇ခုနှစ်ကတည်းက ၎င်းနှစ်ခြိုက်သည့် ရှေးဟောင်းဗိသုကာလက်ရာပုံစံများကိုဖန်တီးနေခဲ့သူဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံရှိစူးကျိုးဥယျာဉ်များသည် သဘာဝနှင့်လူသားတို့ သဟဇာတဖြစ်မှုကို ဖော်ညွှန်းသည့် သင်္ကေတအဖြစ်လူသိများသည်။ (Xinhua)
Chinese craftsman builds mini Suzhou garden with 2,000 bamboo sticks
PUTIAN, Nov. 15 (Xinhua) — Chinese craftsman Chen Jinjie used 2,000 bamboo sticks to buildamodel of traditional Suzhou garden in six months, wowing netizens.
The 42-year-old Chen lives in Xiangtang Village, Putian City in east China’s Fujian Province. He started working asacarpenter at an early age.
The Suzhou garden model is his fifth craftwork. It’s 160 centimeters long, 140 centimeters wide, 70 centimeters high and weighs about 30 kilograms. The garden has 16 rooms. Though it’s small in size, it has pavilions, terraces andacourtyard.
Since 2017, Chen Jinjie has been creating his favorite models of ancient architecture.
China’s Suzhou gardens are known as the embodiment of harmony between nature and man.